लगातार पेट बढिरहेको छ ? अपनाउनुस् यी सजिला तरिका, हेर्नुस – Rapti Khabar
शरीर पातलो छ तर पेट भने लगातार फुल्ने समस्या लगभग १० देखि ८ मानिसहरुले भोगिरहेका हुन्छन् । पेट बढ्दा आफूलाई मन पर्ने कपडा लगाउन नपाउने तथा आफैलाई असहज महसुस हुने गर्छ ।
बिहानको नास्तामा दही र चिनी, यस्ता छन् ५ फाइदा, पढ्नुस
दहीलाई सुपर फुड मानिन्छ । यसमा थुप्रै गुणहरु पाइन्छ । जुन हाम्रो शरीरका लागि फाइदाजनक छ । दहीले पाचन प्रक्रियालाई मजबुत बनाउँछ । हरेक दिन दहीको सेवनले पेटसम्बन्धी समस्याको समाधान गर्छ । यसका साथै दहीमा विभिन्न प्रकारका पोषक तत्व पनि पाइन्छ ।
दहीमा क्याल्शियम, भिटामिन बी–१२, भिटामिन बी–२, म्याग्नेशियम, पोटाशियम जस्ता महत्वपूर्ण पोषक तत्त्वले भरिपूर्ण हुन्छ । दहीलाई चिनीसँग खाने हो भने यसले शरीरलाई अझ धेरै फाइदा पुर्याउँछ । घरबाट बाहिर निस्किँदा दही र चिनी खाने हो भने यसले शरीरमा ग्लुकोजको मात्रा बढाउँछ र शरीरलाई उर्जा दिन्छ ।
दही र चिनी खाँदा सिस्टिटिस र युटिआई जस्ता समस्याबाट छुटकारा मिल्छ । मलद्वार र मुत्राशयमा हुने जलन कम गराउँछ । जो व्यक्तिले पानी कम पिउने गर्छन् ति व्यक्तिहरुका लागि दही आवश्यक मानिन्छ ।
दहीमा भिटामिन ए, भिटामिन ई, भिटामिन सी, फोलेट, क्याल्शियम, भिटामिन बी–१२, भिटामिन बी–२, म्याग्नेशियम, पोटाशियम, भिटामिन पाइरिडोक्सिन, क्यारोटिनाइड जस्ता भिटामिनहरु पाइन्छ जसले पेटलाई तन्दुरुस्त राख्छ ।
कोरोना संक्रमण हुदाँ छालामा कस्तो लक्षण देखिन्छ ?
कोरोना भाइरसले दीर्घरोग, मुटुरोग, मधुमेह जस्ता समस्या भएकालाई बढी संक्रमण गर्ने कुरामा पुष्टि भैसकेको छ । अहिले चिकित्सा विज्ञानको क्षेत्रले यो भाइरसले मानिसको अरु कुन कुन अंगमा कस्तो किसिमले संक्रमण गर्छ भन्ने बिषयमा अनुसन्धान भैरहेको छ । यसैगरी कोरोनाको कारणले छालामा पनि विभिन्न किसिमका लक्षणहरू देखापार्ने छाला तथा यौनरोग विशेषज्ञ डा. कमलराज धिताल बताउँछन् । […]